Monitor & Desktop Deals – ICT.com.mm
BenQ PD2700Q DesignVue Designer Professional Monitor (2K QHD, 27 inch)K802,427
BenQ 32-inch 4K UHD Monitor IPS Panel (sRGB and Re-709)-PD3200UK1,824,241
NEC Express Server 5800/ T71h Desktop (Intel Xeon Processor E3 1220)K791,000
BenQ EW3280U 32 inch 4K HDR Multimedia Monitor with HDRi TechnologyK1,940,448
Dahua Wall Mounted Digital Signage LDH22-SAI200K423,000 K212,000-50%
Monitor & Desktop Deals
BenQ PD2700Q DesignVue Designer Professional Monitor (2K QHD, 27 inch)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ 27 inch 2560×1440 QHD Resolution 100% Rec. 709 and sRGB with IPS Technology DualView Function and Darkroom Mode Precise Details to Create Perfection Design professionals never compromise...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ 32” 4K UHD 16:9 IPS LED Monitor 100% Rec.709 and sRGB color spaces Darkroom View files side-by-side with DualView. Easily compare photos and videos in specialized CAD/CAM....
NEC Express Server 5800/ T71h Desktop (Intel Xeon Processor E3 1220)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model Name: NEC High Performance Desktop(T71h Desktop) CPU: Intel Xeon Processor E3 1220 Memory: 8GB DDR4 RAM (up to 32GB) Storage: 1TB 3.5 HDD (up to 16TB Disk...
BenQ EW3280U 32 inch 4K HDR Multimedia Monitor with HDRi Technology
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ 32” 3840x2160 UHD 16:9 HDR IPS LED 4K Monitor Premium Computer Monitor with Built-in Speakers by treVolo USB-C One-Cable Connectivity Warranty:3Years (Panel 1 Year) The...
Dahua Wall Mounted Digital Signage LDH22-SAI200
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Diagonal Screen Size: 22″ Resolution: 1920×1080 Display Colors: 16.7M (8 bits) Brightness: 250nits Contrast Ratio: 3000:1 Response Time: 18ms Processor: Cortex-A7 1.5GHz Quad Core CPU Operating System:...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ 100% Rec.709 and sRGB color space with IPS Technology DualView function and HDR 10 content support Darkroom, CAD/CAM and Animation Display Mode Accurate Color for Supreme Aesthetic...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Free Gift: Acer Polo Shirt Resolution: 1920x1080 @144Hz AMD Free SyncDisplay Size: 23.8" Brightness: 250 cd/m2 ( HDR ) Ready Technolagy Contrast: 100000000: 1 Max ( ACM...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Free Gift: Acer Polo Shirt Resolution: 1920x1080@144Hz AMD Free Syn,Black Boost Technology Brightness: 400 nits cd/m2 ( HDR ) Contrast: 100000000: 1 Max ( ACM ) Response...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Panel Type: IPS Screen Resolution: 1920 x 1080 Display Size: 27″ Refresh Rate: 75Hz Response Time: 8ms Contrast Ratio: 1000:1 Aspect ratio: 16:9 Input Connector: VGA &...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: AOC Display Size: 28″ Color: Black with Silver Stand Panel Type: IPS Screen Resolution: 3840 x 2160 Response Time: 4ms (GtG) Contrast Ratio: 1000:1 Brightness(typical): 300 cd/m²...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: AOC Color: Black Panel Type: IPS Screen Resolution: 3840 x 2160 Display Size: 27″ Refresh Rate: 75Hz Response Time: 4ms Contrast Ratio: 1000:1 Aspect ratio: 16:9...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: AOC Colour: White Screen Resolution: 2560 x 1440 pixels Brightness (typical): 250 cd/m2 Contrast Ratio: 3000 : 1 (Typical) 20 Million: 1 (DCR) Refresh Rate: 75Hz...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Display Size: 32″ Refresh Rate: 165Hz Response Time: 1 ms Brightness (typical): 250 cd/m² Contrast Ratio: 3000 : 1 (Typical) 80 Million : 1 (DCR) Panel Type:...
AOC C27G3 27-inch Curved Gaming Monitor (Black)
Model name: C27G3 Panel: 27" (VA / 1000R) Pixel Pitch (mm): 0.3108 (H) × 0.3108 (V) Effective Viewing Area (mm): 596.736 (H) × 335.664 (V) Brightness (typical): 300 cd/m² Contrast...
Panel: 31.5" (VA / 1000R) Pixel Pitch (mm): 0.36375 (H) × 0.36375(V) Effective Viewing Area (mm): 698.4 (H) × 392.85 (V) Brightness (typical): 250 cd/m Contrast Ratio: 3000 : 1...
Model name: CQ32G3SE Panel: 31.5" (VA / 1000R) Pixel Pitch (mm): 0.2724 (H) × 0.2724 (V) Effective Viewing Area (mm): 697.344 (H) × 392.256 (V) Brightness (typical): 250 cd/m² Contrast...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Screen Size (inch): 27 inch Panel Type: IPS Resolution: 2560 x 1440 Refresh Rate: 60Hz Response Time (GtG):5ms Brightness (Typical): 250 Contrast (Dynamic): 50M:1 Contrast...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Material: Aluminium Weight: 2-9 kg Panel: fit for 12 inch to 27 inch Screens 360° Free Rotation The AOC single display stand is made of aluminum alloy...
Acer All In One C22-962 Silver (i3-10th Gen)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Display Screen: 21.5 “(None-Touch) Resolution: 1920 x 1080 LED (IPS & Anti-Glare Screen) Processor: Intel Core i3-1005G1 (4 MB Cache, 1.20 GHz up to 3.40 GHz) Graphics:...